Mogadishu Journal » 2019 » May » 14
Mjournal :-Xilli kiiska muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya uu marayo meel xasaasi ah ayaa waxaa soo baxaysa qiimayn lagu samaynayo dhaqaalaha ku baxaya dacwadaasi. Qareennada labada dhinac u doodaya ayaa la sheegay inay yihiin kuwa helaya faa’idada ugu badan ee dhaqaale....
Mjournal :-Ciidamada Booliska Maamulka la magac baxay Somaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa waxa ay xabsiga dhigeen wiil dhalinyaro ah oo ku labisnaa dhar laga tolay dharka Buluuga ah ee Calanka Soomaaliya maalin kahor maalinta aasaaska xisbiga SYL. Ninka la xirey oo...
Mjournal :-Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hir-Shabeelle ayaa si cad uga horyimid Go’aankii Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi goodax Barre u joojiyey imtixaankii Dugsiyada Sare ee dalka. Isaga oo Magalada Jowhar kula hadlayay Arday ka banaanbaxeys...
Mjournal :-Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa markii u horeysay ka warbixiyay Shirkii Wadatashiga ee magaalada Garowe ku dhex maray Madaxda dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Madaxda dowlad goboleedyada, kaasoo fashil ku dhamaaday. Saciid Deni ayaa sheegay in...
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lagu weeraray Xarunta Maamulka degmada Warta-Nabada ee Gobolkan Banaadir,waxaana jira khasaaro kala duwan oo ka dhashay qaraxaas. Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in gaari NOHA ah oo laga...
Mjournal :-Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) ayaa fal-danbiyeed weyn oo u baahan in caddaaladda la horgeeyo dadkii ka danbeeyey ku tilmaamay in Imtixaankii Dugsiyada Sare la xado oo suuqa la geliyo. Guddoomiyaha...
Mjournal :-Waxaa saakay ka bilowday magaalada Muqdisho banaan bax ay dhigayaan qaar ka mid ah Ardayda wax ka barata Iskuulada, kuwaasoo maalmihii la soo dhaafay u fadhiyay Imtixaankii shahaadiga ahaa ee ay dowladdu qaadeysay. Ardayda oo boqolaal ku dhow ayaa isugu soo uruuray...
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya Magalada Hargeysa ayaa waxaa ay sheegayaan in khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah uu ka dhashay roobka guga oo xalay ilaa Shalay gelinkii dambe ka da’ayay Xaafadaha kala duwan ee Magalada Hargeysa. Roobkaas oo watay biyo daadad ah ayaa inta la...